China 55 HRC Carbide 3 Flute Standard Length End Mills ho an'ny mpanamboatra sy mpamatsy tokana Aluminium | Mingtaishun
55 HRC Carbide 3 Flute Standard Length End Mills ho an'ny Aluminium tokana
Manana injeniera ambony amin'ireto indostria ireto izahay ary ekipa mahomby amin'ny fikarohana. Ankoatr'izay, manana vava sy tsena fitahirizam-bokatra any Shina isika amin'ny vidiny mirary. Noho izany, afaka mihaona amin'ny fanontanina samihafa amin'ny mpanjifa samihafa izahay. Azafady mba jereo ny tranokalanay hijerena vaovao misimisy kokoa avy amin'ny vokatray.
Ny vokatray dia eken'ny besinimaro sy atokisan'ny mpampiasa ary afaka mamaly ny filàna ara-toekarena sy sosialy miova tsy tapaka. Miarahaba ny mpanjifa vaovao sy taloha izahay amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiainana mba hifandray aminay amin'ny fifandraisana amin'ny raharaham-barotra amin'ny ho avy sy ny fahombiazan'ny fiaraha-miasa!
Ny asa, ny fanoloran-tena dia zava-dehibe indrindra amin'ny iraka ataontsika. Nifanaraka tamin'ny fanompoana ny mpanjifa hatrany izahay, namorona tanjona kendrena amin'ny fitantanana lanja ary manaraka ny fahatsoram-po, fanoloran-tena, hevitra fitantanana maharitra.
Fandefasana sy fanomezana:
(1) Noho ny antony ara-piarovana dia tsy handefa ny kaonty any amin'ny adiresy efa voamarinao fotsiny izahay.
(2) Tsy tompon'andraikitra amin'ny lozam-pifamoivoizana izahay, fanemorana na olana hafa izay tompon'andraikitra amin'ny serivisy fandefasana.
(3) Ny mpividy dia tompon'andraikitra amin'ny hetra sy / na haba ampandoavin'ny fireneny.
Tompon'antoka amin'ny fiantohana izay heveriny fa ilaina ny mpividy.
(1) Raha tsy afa-po amin'ny fividianana ianao dia afaka mifanakalo ilay entana. Ny mpividy dia tompon'andraikitra amin'ny saram-pandefasana rehetra.
(2) Ny mpividy dia tokony hifandray aminay ao anatin'ny 3 andro aorian'ny fandefasana azy raha toa ka te-hifanakalo entana tsy mandeha na diso izy ireo.
(3) Dingana fifanakalozana:
a. Mifandraisa aminay amin'ny alàlan'ny ivon'ny hafatra Alibaba.com;
b. Omeo antsipiriany araka izay azo atao momba ny olana mahazo anao;
d. Ny fanomezan-dàlana hamerina ilay entana dia havoaka;
d. Avereno ilay entana ho an'ny fifanakalozana nifanarahana.
(4) Ny entana rehetra dia tsy maintsy averina amin'ny toerany tany am-boalohany, mba hahafenoany fepetra amin'ny fifanakalozana.
(5) Mariho tsara:
Tsy manarona zavatra simba izahay aorian'ny fampiasana na vokatry ny fahasimban'ny rano.
Teo aloha: 55 HRC Carbide 3 Fantsom-pandrefesana lava lava ho an'ny aliminioma
Manaraka: 55 HRC Carbide 4 Flute Roughing End Mill
55 HRC Carbide 4 Flute fenitra halavan'ny zoro R ...
HRC55 lava halavan'ny famaranana toradroa